China Mpanamboatra sy mpamatsy plastika misongadina | Mestech
Famonosana plastikadia fizarana famolavolana tsindrona manokana, izay ampiasaina hanambatra ny ampahany amin'ny fitaovana roa ho faritra iray amin'ny alàlan'ny famolavolana tsindrona. Ny ampahany roa dia namboarina in-droa tamin'ny bobongolo samihafa sy ny milina fanorohana tsindrona.
Ny plastika amin'ny famolavolana dia dingana iray hametrahana ampahany plastika misy na maromaro misy fitaovana samihafa ao anaty lasitra fanindronana alohan'ny tsindrona, avy eo ny plastika atsindrona ho bobongolo, ny fonosana voatsindrona manarona na fonosina ireo ampahany napetraka mba hamorona ampahany iray.
Dingana voalohany: amboary ny ampahany efa napetraka. (Mould1)
Dingana faharoa: apetraho ao anaty lasitra fanindronana ilay efa napetraka, ary ataovy miverimberina amina resina plastika. (Mould2)
Ny ampahany plastika farany
Misy karazany roa ny famolavolana
Karazana 1: ny ampahany / singa efa napetraka teo aloha dia plastika, izay noforonina tamin'ny lasitra hafa. Ity fomba ity dia an'ny famolavolana tsindrona indroa mitifitra. Ity dia plastika amin'ny famolavolana resahina eto.
Karazana 2: Ny plastika efa napetraka dia tsy plastika, fa mety metaly na faritra matevina hafa (oh: singa elektronika). Miantso an'ity dingana ity izahay hamolavola koronosy.
Matetika ny ampahany mialoha ny fanomanana dia misy ampahany na tototry ny akora manaraka (fitaovana plastika) amin'ny fizotran'ny famolavolana.
Fantatrao ve ny fampiharana plastika amin'ny famolavolana?
Betsaka ny tanjona amin'ny plastika amin'ny famolavolana. Ny tena fahita amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
1. Manampia loko hanatsarana ny bika aman'endrika (effet est estetika).
2. Omeo faritra mitazona mety amin'ny ampahany.
3. Manampy faritra marefo amin'ny faritra henjana hampitomboana ny elastika sy ny fahatsapana mikasika.
4. Manampia fitaovana elastika handrakofana ny vokatra na tombo-kase ho an'ny rano-porofo.
5. Mitsitsia fotoana fivoriambe. Tsy ilaina ny mampifandray ilay ampahany vy sy ilay faritra plastika amin'ny tanana na ho azy. Mila apetrakao ao anaty lasitra fotsiny ny ampahany amin'ny fitaovana ary ampidiro ny ampahany plastika. Tsy ilaina ny manangona azy mihitsy.
5. Amboary ny ampahany iray ao anaty iray hafa nefa tsy mampiasa fasteners na adhesives.
Karazana vokatra inona no mety amin'ny plastika amin'ny famolavolana?
Ny fizotran'ny famolavolana plastika dia mety amin'ny vokatra maro, izay miovaova arakaraka ny fepetra manokana momba ny vokatra. Matetika dia asiana borosy nify, kitapo fitaovana (toy ny boribory tsy misy tariby sy visy) ary ny vokatra fikarakaranao manokana (toy ny tavoahangy shampooing sy ny hety), ny fantson-tariby, ny plug, ny mpihazona SIM, sns.
PC & TPU manarona tranga tsy misy rano
PC & TPU manarona varavarana bateria tsy tantera-drano
PC & PC / ABS tranga plastika misongadina amin'ny vokatra elektronika
PC & TPU manarona tranga fiarovana ho an'ny telefaona finday
Loko roa lehibe lehibe manodinkodina ampahany plastika
Kodiarana misongadina ABS & TPE
Ireto misy ohatra mahazatra momba ny fampiharana mihombo:
1. plastika mafy manarona plastika - voalohany dia plastika henjana no napetraka. Avy eo, misy plastika mafy hafa atsindrona amin'ireo faritra efa napetraka mialoha. Ny plastika dia mety tsy mitovy amin'ny loko sy / na ny resina.
2. Plastika mafy fonosina amin'ny resina malefaka elastomer - apetraka aloha ireo faritra plastika henjana. Ny resina elastomer (TPU, TPE, TPR) dia avy eo novolavolaina na manodidina ireo faritra efa napetraka teo aloha. Matetika izy io dia ampiasaina mba hanomezana faritra malefaka tanana ho an'ny faritra henjana.
3. vy vita amin'ny plastika - voalohany, ny milina vy dia milina, alefa na miendrika endrika. Avy eo, ireo ampahany efa napetraka dia atsofoka ao anaty lavaka famolavolana tsindrona, ary ny plastika dia mihorona ao na manodidina ny vy. Matetika izy io dia ampiasaina mba hisamborana ampahany vy amin'ny faritra plastika.
4.Elastomer resin manarona Metal - Voalohany, ny ampahany vy dia milina, atsipy na miendrika. Ny ampahany vy efa napetraka dia atsofoka ao anaty lasitra fanindronana ary ny resina elastomer dia atsofoka ao na manodidina ny vy. Matetika izy io dia ampiasaina mba hanomezana faritra malefaka sy voafehy tsara.
5. Soft elastomer resin fonosana PCBA na singa elektronika, maivana emitting modely, sns
Zava-dehibe ny manamarika fa misy fetrany sy olana mifanentana eo amin'ny akora samihafa izay mila dinihina amin'ny fanonerana. Tsy voafetra amin'ny karazana fitaovana roa ianao. Nahita vokatra vitsivitsy izahay, amin'ny ampahany misy resina plastika telo samihafa natambatra mba hahatratrarana ny lokon'ny loko maro loko. Ity misy ohatra tsotra iray amin'ny vokatra izay hainao tsara: hety.
Matetika, ny fitaovana na ny ampahany efa napetraka dia napetraka ao anaty lasitra fanindronana, amin'izay fotoana izay dia apetraka ao anaty na manodidina ireo faritra efa napetraka ireo resina plastika mihoampampana. Rehefa mangatsiatsiaka sy manasitrana ireo fitaovana fanindronana voafintina, dia atambatra ireo fitaovana roa ireo mba hamorona ampahany tsy miova. Soso-kevitra fanampiny: Tsara matetika ny manana ireo faritra efa napetrakao sy ireo fonosana fonosana azo alaina amin'ny mekanika. Amin'izany fomba izany dia azo ampifangaroana ireo fitaovana roa tsy amin'ny fomba simika ihany fa amin'ny lafiny ara-batana ihany koa.
Inona no tombony azo amin'ny famolavolana mihoatra ny famokarana?
Ny bobongolo mihoampampana dia manana firafitra tsotra sy fizotra miovaova.
1. Izy io dia azo ampiharina amin'ireo ampahany misy ampahany lehibe manarona, indrindra ireo ampahany misy fehikibo miolakolaka. Ity karazana faritra plastika ity dia sarotra ampidirina amin'ny masinina fanorohana tsindrona miaraka amina loko roa, izay azo tanterahina amin'ny famolahana tsindrona plastika.
2. Rehefa tsotra ny endrik'ilay preset plastika ary kely dia kely ny habeny, ary ny ampahany farany manana habe lehibe, dia mety ny mandray azy
famolahana tsindrona plastika rakotra. Amin'izao fotoana izao, ny bobongolo amin'ny lasitra voatondro efa voafaritra dia azo atao bitika kely na loaka maro, izay afaka mampihena be ny vidin'ny lasitra.
3. Rehefa ny plastika efa napetraka sy ny fitaovana fonosina dia plastika (résins) daholo, soso-kevitra fa tokony hampiasaina amin'ny famokarana faobe ny fizotran'ny famolavolana indroa fa tsy overmoiding mba hahazoana kalitao avo, famokarana avo ary vidiny ambany. Rehefa tsy dia avo ny famokarana batch na ny kalitaon'ny kalitao dia azo ampiasaina mba hisorohana ny fampiasam-bolan'ny milina fanosorana indroa miantoana sy ny vidin'ny famokarana bobongolo.
Inona avy ireo fitaovana vita amin'ny ampahany efa napetraka?
Antsoinay ireo ampahany izay napetraka voalohany tao anaty lasitra ho faritra efa napetraka (na faritra efa napetraka mialoha).
Ny ampahany efa napetraka dia mety ho faritra mivaingana, ampahany vy vita amin'ny masinina, ampahany plastika mihorona, na koa vokatra efa misy, toy ny voanjo, visy na mpampifandray elektronika. Ireo faritra efa napetraka ireo dia atambatra amin'ny plastika tsindrona taty aoriana mba hamorona ampahany iray amin'ny alàlan'ny hetsika simika sy ny fifandraisana mekanika. Ny elastomer resins (TPU, TPE, TPR) dia plastika ihany koa, saingy tsy mety amin'ny ampahany napetraka mialoha.
Ahoana ny fomba hisafidianana resina plastika mihoatra ny famolavolana?
Ny resina plastika ampiasain'ny famolavolana be loatra matetika dia plastika. Manomboka amin'ny endrika sombin-javatra izy ireo, ary ny maripanan'ny teboka mampiempo azy ireo dia mazàna ambany kokoa noho ireo ampahany efa napetraka mba hisorohana ireo faritra efa napetraka tsy ho simban'ny hafanana ambony. Ireo sombin-javatra ireo dia afangaro amin'ny additives toy ny colorants, foaming agents and other fillers. Avy eo dia hafanaina amin'ny teboka mandronono ary atsofoka ao anaty lasitra ho ranon-javatra. Misy fetrany ny fitaovana mety amin'ny famolavolana. Raha ny faritra napetraka teo aloha dia faritra vy dia azonao atao ny mampiasa plastika rehetra ho toy ny fitaovana mihoampampana. Ny olana mifanentana dia mety misy raha ny ampahany efa napetraka dia vita amin'ny resina plastika (rubber na TPE) hafa miaraka amina teboka miempo ambany.
Fantatrao ve ny milina famolahana tsindrona amin'ny famolavolana?
Ny milina famolahana tsindrona ampiasaina amin'ny famolavolana plastika dia milina famolahana tsindrona mahazatra, izay mizara roa: mitsangana sy marindrano.
1. Masinina mamolaka tsindrona mitsangana no mitana toerana betsaka kokoa noho ny milina famolavolana tsindrona mitovy taonina mitovy aminy, izay tsy mora tazonina, ka mazàna kely kokoa ny taonina. Mety indrindra amin'ny ampahany kely habe na faritra efa napetraka dia tsy mora apetraka amin'ny lasitra.
2. Ny milina famolahana tsindrona marindrano dia manana taonina lehibe sy habaka fonenana kely, izay mety amin'ny famolavolana ampahany lehibe.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny milina famolahana tsindrona mihoatra ny famolavolana?
1. Ny milina famolahana tsindrona mitsangana dia matetika ampiasaina amin'ny ampahany kely toy ny fantsom-pifandraisana sy ny mpampitohy, ny plug-by, ny lantira sns. Ny lasitra dia tsotra sy mahomby.
2. Ny milina famolahana tsindrona marindrano dia ampiasaina amin'ny ampahany lehibe, izay manana hery ampy ary mitanila amin'ny asa.
3. Ny famolahana tsindrona miloko roa dia atolotra ho an'ny faritra efa napetraka mialoha sy ireo akora voafintina, izay mety hahatratra ny kalitao sy ny famokarana tsara kokoa noho ny famolavolana tsindrona encapsulated.
Ny bobongolo tsindrona amin'ny famolavolana mihoatra ny endriny
Ny overmolding matetika dia manana andiana lasitra fanindronana roa. Ny iray dia ho an'ny famolavolana ny ampahany efa napetraka, ny iray hafa dia ho an'ny ampahany farany amin'ny famolavolana.
Rehefa ny plastika efa napetraka dia tsy plastika na tsy mila mandrafitra tsindrona, andiana lasitra lehibe ihany no ilaina. Miantso an'ity dingana ity izahay hamolavola koronosy.
Ny orinasa Mestech dia manana traikefa amin'ny famolavolana tsindrona vita amin'ny plastika, indrindra amin'ny famolavolana akorandriaka vita amin'ny plastika amin'ny akorandriaka amin'ny vokatra elektronika sy elektrika miaraka amin'ny fitaovana toy ny ampahany efa voatendry. Mestech koa dia manana milina famolavolana tsindrona maro loko, izay afaka mamokatra karazana faritra plastika misy loko roa, faritra mifono plastika amin'ny bobongolo sy ny famolahana tsindrona. Raha mila izany ianao dia mifandraisa aminay.
Previous: Torohevitra momba ny famolavolana sy ny famolavolana ny plastika